သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အိတ်အပ်နဖားကို -> အိတ်အပ်
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan အိတ်အပ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Equivalent Systems: D5, FD5, 3320GR, SY7320
အိတ်-ပိတ်ပွဲစက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဒါဟာစက်ချုပ်သင်တန်းဆင်းပွဲအိတ်သို့မဟုတ်အိတ်များအတွက်သင့်လျော်မယ့် (pocket- နှုတ်ကို) ။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: D5, FD5, 3320GR, SY7320 ။ ထိုကဲ့သို့သော FOXSEW- FX26-2A အဖြစ်အသင့်လျော်အပ်ချုပ်စ​​က်ဆောင်းပါး။ အိတ်-ပိတ်ပွဲစက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဒါဟာစက်ချုပ်သင်တန်းဆင်းပွဲအိတ်သို့မဟုတ်အိတ်များအတွက်သင့်လျော်မယ့် (pocket- နှုတ်ကို) ။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: D5, FD5, 3320GR, SY7320 ။ ထိုသို့သော FOXSEW- FX26-2A အဖြစ်အပ်ချုပ်စ​​က်ဆောင်းပါး, ကိုက်ညီလျက်ရှိသည်။
Equivalent Systems: C-100-S က, SY8128
အိတ်-ပိတ်ပွဲစက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဒါဟာစက်ချုပ်သင်တန်းဆင်းပွဲအိတ်သို့မဟုတ်အိတ်များအတွက်သင့်လျော်မယ့် (pocket- နှုတ်ကို) ။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့အပ်ချုပ်တိုးတက်ရန်နှင့် Skip ချုပ်, အရွယ်အစားသာ 27/250 လျှော့ချဖို့နည်းနည်းကွေးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အတူပါပဲ။ ညီမျှစနစ်များပါဝင်သည်: C-100-S က, SY8128 ။ အိတ်-ပိတ်ပွဲစက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဒါဟာစက်ချုပ်သင်တန်းဆင်းပွဲအိတ်သို့မဟုတ်အိတ်များအတွက်သင့်လျော်မယ့် (pocket- နှုတ်ကို) ။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့အပ်ချုပ်တိုးတက်ရန်နှင့် Skip ချုပ်, အရွယ်အစားသာ 27/250 လျှော့ချဖို့နည်းနည်းကွေးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အတူပါပဲ။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: C-100-S က, SY8128 ။
အခုဆိုရင် Enquiry +အခုဆိုရင် Enquiry -
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အိတ်အပ် : BCX5，BCX100
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ချုပ်အပ် : DNX1
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အကောင်းဆုံးအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို : DRX2
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အိတ်အပ် : MTX190
Bag Needle | Beutel Nadel | Сумка иглы | Bolsa de Agulha | Sacchetto di Ago | थैला सुई | Aguja de Costura | حقيبة إبرة | Túi kim | กระเป๋าเข็ม | Tas Jarum | ব্যাগ সুই | Çanta İğne | កាបូប​ម្ជុល | အိတ်အပ်